Gabdho timo-jarid ku mutay mahad-celin qaran! | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Gabdho timo-jarid ku mutay mahad-celin qaran!
Gabdho timo-jarid ku mutay mahad-celin qaran!
Posted by: Ahmed Haaddi January 25, 2019
Himilo FM – Jyoti Kumari, iyo walaasheed Neha muddo afar sano ah waxaa lagu tirinayay ragga!. Midi waxay jirtaa 18 midda kalana 16, waxay ka soo jeedaan gobolka Uttar Pradesh ee dalka Hindiya (India). Taniyo sannadkii 2014-kii waxay ka shaqeynayeen Tima-jare. Waxayna ku muteen mahad-celin!
Gabdhahan ayaa timo-jaridda bilaabay kaddib markii uu si daran u xanuunsaday aabbahood oo raysle ahaa. Waxa uu noqday sariir yaal, waxaa la xiray xaruntii uu timaha ku jari jiray. masruufkii reerka ayaa ciriiri galay.
Balse Jyoti, iyo Neha oo markaa aad u da’yaraa ayaa buuxiyay kaalintiisii. Waxay dib u fureen tima-jarihii, iyagoo ogaa in ragga qaar aysan jecleyn iney dumar u xiiraan, waxay qaateen go’aan ah inay u dhaqmaan sida ragga si loogu maleeyo.
“Tani waxay aheyd shaqo adag balse ma aanan haysan doorasho kale oo ka wanaagsan. sidaa daraadeed, waxaan isku ekeysiinay wiilal, waxaan magacyadaydii u bedelnay kuwo rag, waxaan u lebisanay sida wiilasha, waxaan timaha u jaranay sida wiilasha ciyaartoyda ah, waxaa kale oo aan yeelanay hab-dhaqanka wiilasha, Dadaalkaas waxaan ku badbaadineynay qoyskayaga iyo wax-barashadayda.” ” erayadaas waxaa xasuusteeda ka listay Jyoti.
Si aan loo fahmin gabdhahan ayaa timahooda si gaagaaban u jartay, waxay xirteen dhar rageed, waxay la baxeen Deepak iyo Raju oo ah magacyo rag. Balse, dadka xaafadda la degan badankood way ogaayeen inay gabdho yihiin laakiin ragga xaafadaha kale fikrad kama haysan.
Inay rag isku ekeysiiyeen labadan gabar waxay u fududeysay inuu sii shaqeeyo tima-jarihii, waxay maalintii kasta ka soo xareeyaan $5.63. lacagtan waxay ku filnaatay qoyska, waxay awoodeen inay aabbahood daweeyaan iyo inay sii wattaan wax-barashadooda.
Qaar ka mid ah dadka deegaanka waxay kala kulmeen culeys balse way iska dhego-tireen waxay xoogga saareen shaqada, waxay noqdeen kuwo aad isugu kalsoon, waxay awoodeen inay qariyaan jinsigooda dhabta ah. Balse dhawaan ayay bilaabeen inay qiso sireedooda la wadaagaan dad badan afar sanno kaddib markii uu aabahood caafimaaday dibna u shaqo bilaabay.
“ Hadda waxaan helnay kalsooni buuxda qofna kama cabsi qabno, badanaa dadku waxay noo yimaadaan iyagoo og inaan hablo nahay.” Jyoti ayaa sidaa tiri .
Kaddib markii uu weriye sheekada gabdhahan ku daabacay wargeys-ka Hindi newspaper, Jyoti and Neha waxay kasbadeen ammaan uga timid qaranka, maamulka deegaanka iyo dadweynahaba.
“Waxay garbahooda ku qaadeen masuuliyadda reerka, waxay daryeeleen waalidkooda, waa geesiyaal. Tani waa sheeko cajiib ah taas oo bulshada u sheegeysa inay u qalmaan xushmad, aad ayay u garasho badan yihiin waxay tusaale u yihiin awoodda haweenka, dawladda gobolka waxaan kula talinayaa inay siiyaan abaal-marin ku habboon.” sidaa waxaa weriyaasha u sheegay Abhishek Pandey oo u hadlay maamulka deegaanka.
Previous: Maqal:- Barnaamijka Haweenkeenna
Next: QM oo markii ugu horreysay maalin gaar ah u asteysay waxbarashada